नेपालीको घोर अ,पमान गर्ने भा,रतीय से,नापति नरभाने नेपाल आउने मिति नै तोकियो, यति ठूलो स,म्मान दिने गर्ने ओली सरकारको त,यारी ! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालीको घोर अ,पमान गर्ने भा,रतीय से,नापति नरभाने नेपाल आउने मिति नै तोकियो, यति ठूलो स,म्मान दिने गर्ने ओली सरकारको त,यारी !
नेपालीको घोर अ,पमान गर्ने भा,रतीय से,नापति नरभाने नेपाल आउने मिति नै तोकियो, यति ठूलो स,म्मान दिने गर्ने ओली सरकारको त,यारी !
भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरभाने नेपाल आउने भएका छन् । सीमा विवाद र कोरोना महामारीका कारण रोकिएको उनको नेपाल भ्रमणको तयारी तीव्र पारिएको छ । नेपालले उनलाई मानार्थ सेनापतिको सम्मान दिने भएकाले उनी नेपाल आउन लागेका हुन् ।
नेपाली सेनाको जंगीअड्डा स्रोतका अनुसार नरभानेलाई कात्तिक महिनाभित्रै नेपाल भ्रमणमा आउने गरी औपचारिक निमन्त्रणा पठाउन लागिएको छ । भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक संवादपछि निम्तो पठाउन लागिएको सैनिक स्रोतको दाबी छ ।
भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्रलाई मिचेर सडक निर्माण गरेपछि दुई देशबीच सीमा विवाद सतहमा आएको थियो । त्यहीबीच नरभानेले नेपालले कसैको इसारामा लिपुलेकको मुद्दा उचालेको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रकरणपछि मानार्थ सेनापतिको सम्मान दिने प्रचलन नै रोक्न माग समेत गरिएको थियो । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भने २९ पुस २०७५ मा भ्रारत भ्रमण गरेर मानार्थ सेनापतिको सम्मान ग्रहण गरिसकेका छन् ।
उनी नेपाल फर्किएपछि २० माघ २०७६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतीय सेना प्रमुख नरभाने र इजरायलका सेना प्रमुख अभी जोकोभिचको नेपाल भ्रमण स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यही अनुसार नरभानको भ्रमण हुन लागेको हो ।
मानार्थ सेनापतिको सम्मान सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिबाट प्रदान गर्ने चलन छ । महामारीका वेला हुन लागेको भ्रमणमा नरभानेले कसकसलाई भेट गर्छन् भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
जंगीअड्डा स्रोत भन्छ, ‘भेटवार्ता र कार्यक्रमबारे भ्रमण मिति तय भएपछि मात्र टुंगो लाग्छ ।’ नेपाल र भारत दुवै देशका सेना प्रमुखलाई एकअर्काको देशमा मानार्थ सेनापतिको सम्मान दिने प्रचलन छ ।source:onlinemarg
ख बरदार भारतलाई नसोधि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिएला भन्ने नेपालकी यी सांसद को हुन् ?
बिदेशमा काम गर्ने 10 लाख नेपाली ले रोजगारी गुमाउने
दैवले खोस्यो दशै मनाउने सपना, भारतबाट घर फर्किएका पाँच जना बाटो मै अस्ताए